म्यानचेस्टर सिटी जालान् त मेस्सी?
नेपाल लाइभ सोमबार, मंसिर ८, २०७७, १६:०३
काठमाडौं- इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीमा प्रशिक्षक पेप गार्डिओलाको समय गएको हप्ता दुई वर्ष थपिएसँगै उनीमाथि पहिलो प्रश्न थियो- लियोनल मेस्सी सिटी ल्याइने सम्भावना बढेको हो?
त्यसमा गार्डिओलाको उत्तर थियो- ‘म चाहन्छु मेस्सीले आफ्नो फुटबल जीवन बार्सिलोनामा नै सकाउन्। म एक बार्सिलोना समर्थक पनि भएकाले त्यसमा नै खुसी हुनेछु। अब उनको सम्झौता सकिँदैछ त्यसमा उनले के सोचेका छन् भन्ने मलाई थाहा छैन।’
सार्वजनिक रुपमा गार्डिओलाले जे भने पनि सिटीले मेस्सीलाई चाहिरहेको छ, जसका सक्नेसम्म सबै प्रयास गर्नेछ। कतिपयले गार्डिओलाको थप सम्झौतामा प्रमुख उपलब्धी नै मेस्सी के गर्छन् भन्नेमा निर्भर रहेको विश्लेषण गरिरहेका छन्।
म्यानचेस्टर सिटीमा खेलाडी फेरबदल आवश्यक देखिएको आवाज उठिरहेको छ। प्रिमियर लिगमा सिटीको अहिलेको अवस्थाले पनि त्यो आवाजलाई बढाउने काम गरिरहेको देखिन्छ। लिगमा आठ खेल खेल्दा सिटी अहिले १३औँ स्थानमा छ। जसबाट माथि उठ्न धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नयाँ सिजनअघिको खेलाडी किनबेचको समयमा सिटीले स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबाट मेस्सी लैजान आफूले गर्नुपर्ने सबै प्रयास गरेकै हो। मेस्सी बार्सिलोना छाड्न चाहन्छन् भन्ने विषय बाहिरिएदेखि उनलाई लैजान सबैभन्दा अघि सिटी नै थियो। तर बार्सिलोनाले मेस्सीलाई पठाउन नचाहनु र सहज अवस्था नभई मेस्सीले पनि छाड्ने मनसाय नदेखाउनुले विषय टुंगिएको थियो।
त्यसबेला मेस्सीले सिटी जाने मनस्थिति बनाउनुको प्रमुख कारण गार्डिओला नै थिए। यसैले अहिले गार्डिओलाको समय थप भएसँगै मेस्सी सिटी जाने सम्भावना बढेको विश्लेषणले आधार पाइरहेको छ। सिटीमा आवश्यक देखिएको परिवर्तनको कार्यभार गार्डिओलामाथि नै पर्दा उनका लागि मेस्सी प्रमुख पात्र हुन सक्छन्।
गार्डिओलाले अझै दुई वर्ष सिटीमा नै रहने निर्णय मेस्सीका कारण मात्र गरेका भने होइनन्। तर गार्डिओला र मेस्सीको सम्बन्ध मेस्सीको भविष्यसँग मात्र होइन सिटीको समयसँग पनि जोडिएको छ। पछिल्लो पटक मेस्सीले बार्सिलोना छाड्न चाहँदा सबैभन्दा पहिले गार्डिओलासँग नै गरेको सल्लाहले पनि त्यसलाई स्पष्ट पार्छ।
मेस्सी र गार्डिओलाको त्यो छलफल चार घन्टासम्म चलेको स्पेनिस फुटबल विश्लेषक गिलियम बालागुले बिबिसीमा लेखेका छन्। जहाँ प्रिमियर लिगमा खेल्नु कस्तो हुनेछ, म्यानचेस्टर सिटीको अवस्था कस्तो छ, कस्ता कुराहरुमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ता विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो।
मेस्सीको अवस्था नयाँ सिजनमा पनि बार्सिलोनामा राम्रो देखिन सकेको छैन। गोलमा बढ्ने उनको क्षमतामा कमि आएको देखिन्छ भने अन्य व्यवहारिक कुरामा पनि उनी खुसी छैनन्। यसैले जनवरीको खेलाडी किनबेच समयमा नै सिटीले मेस्सीसँग सम्झौताको पहल गर्ने खबर आइरहेका छन्। बार्सिलोना अध्यक्ष जोसेप मारिया बर्टामेउको राजीनामाले अबको सम्झौता सहज हुने विश्वास पनि छ।
बार्सिलोना अध्यक्षमा हुने नयाँ चुनावपछि को आउँछन् भन्ने विषय मेस्सीसँग जोडिएको छ। अध्यक्षका सबैजसो प्रत्याशीले मेस्सीलाई बार्सिलोनामा नै रोक्ने आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाइरहेका छन्। मेस्सीलाई बार्सिलोनाले रोक्न चाहनुसँगै उनलाई लैजाने दौडमा सिटी बाहेकका क्लब पनि छन्। तर मेस्सीको इच्छा र गार्डिओलाको अवस्थाले सबैभन्दा अघि सिटी नै छ। जुनसम्म बार्सिलोनाको सम्झौतामा रहेका मेस्सीले जनवरीमा पक्कै केही सोच्ने नै छन्।
यसैले सिटीका लागि अब मेस्सी लैजानुमा रकम बाधक हुने छैन। मेस्सीसँग उनी सन्तुष्ट हुने तलब सम्झौताबाहेक अन्य झन्झट सिटीलाई हुने छैन। सिटीमा मेस्सीमाथिको आश प्रिमियर लिगमा भन्दा बढी च्याम्पियन्स लिगलाई लिएर छ। गार्डिओलाले सिटीलाई च्याम्पियन्स लिगमा राम्रो गराउन नसकिरहँदा मेस्सीको आगमन टिमका लागि फरक स्वादसँगै आत्मविश्वास पनि हुनेछ।
गार्डिओला बार्सिलोनाको प्रशिक्षक रहँदा सन् २००८ देखि २०१२ सम्मको समय मेस्सीका लागि पनि उत्कृष्ट समय हो। जुन समय मेस्सीले १३६ खेलमा १३८ गोल र ५५ एसिस्ट गरेका थिए। त्यो त्यही समय युरोपियन प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य खेलाडीको तुलनामा सबैभन्दा उत्कृष्ट हो।
३३ वर्षका मेस्सी अहिले सिटीमा गएर उस्तै अपेक्षा नहोला तर उनी अझै मैदानमा ‘प्ले मेकर’ नै छन्। बार्सिलोनामा बढिरहेका मेस्सीका लागि सिटीको शैली पनि अमिल्दो छैन। त्यसमा गार्डिओलाले टिमको शैली मेस्सी अनुरुप विकास गर्ने नै छन्।
नयाँ सिजनअघि पनि मेस्सीले खुसी मनले बार्सिलोनामा रहन्छु भनेर बोलेका होइनन्। आफू हुर्किएको क्लबविरुद्ध कुनै पनि मुद्दा मामिला गर्न नपरोस् भनेर नछाड्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए। यसमा लामो समयको द्वन्द्वमा बार्सिलोना ब्यवस्थापनको जित र मेस्सीको हार देखियो तर त्यसले बार्सिलोनालाई मैदानको जित निश्चित गर्न सकेको छैन। यसैले मेस्सीले अझै सिटी जाने मन मारिसकेको देखिँदैन।
मेस्सीले गरेका गोल, गोलका लागि बनाएका अवसर, व्यक्तिगत अवार्ड र टिमका लागि जितेका सबै उपाधिलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने पनि उनको फुटबल कला मात्रैले उनको शैलीमा फुटबल समर्थक मुग्ध हुन सक्छन्। त्यो सँगै फुटबल बजारमा मेस्सीको नामले मात्र हुने व्यापारको गणना ठूलो छ। जसको फाइदा लिन कुन क्लब नचाहला?
यो सबैमा अन्तिम आधार मेस्सी के चाहन्छन् भन्नेमा नै निर्भर रहन्छ। प्रभाव या लोभमा परेर निर्णय लिनेमा उनी पर्दैनन्। त्यसमा असर गर्नेछ ला लिगा र च्याम्पियन्स लिगमा यो सिजन बार्सिलोनाको नतिजा कस्तो हुनेछ?